Wati waedza mwenje wechiedza kurapa?
Wati waedza mwenje wechiedza kurapa? Chiedza cheChiedza? Chiedza cheBlue? Ndeipi yakakodzera iwe uye ndeipi iyo inokuwanira iwe mhinduro dzakanakisa? Yera LED Mwenje Therapy ndiro rakakwana ganda rinonditora iro rinosiya ganda rako richitaridzika riine hutano uye richipenya. Izvo zvakanakira: Ronda kupora -Skin Rejuvenation -Rosacea uye kutsvuka Yero LED Mwenje Therapy iri zvakare kurapa kukuru mushure meCosmetic Majekiseni, Micr ...
Chii chinonzi HI-EMT Muviri Kuveza?
Uchishandisa HI-EMT (High Energy Focused Electromagnetic Wave) tekinoroji kuti irambe ichiwedzera uye kubatirana masisitimu e autologous uye kuita kudzidziswa kwakanyanya kugadzirisa zvakare chimiro chemukati cheiyo mhasuru, ndiko kukura kwemhasuru fibrils (kuwedzera kwemhasuru) uye kugadzira mapuroteni matsva emaketani. uye mhasuru fibers (musclehyperplasia), kuitira kudzidzisa uye kuwedzera mhasuru uye vhoriyamu. & nbs ...
Runako Salon Rinofanira Sei Kusarudza Bvudzi Rinobvisa Mudziyo?
Yebvudzi kubviswa kwezvakanaka michina, laser kubviswa bvudzi uye kusarudza bvudzi kubviswa izvozvi zvinoshandiswa. Saka runako salons runosarudza sei bvudzi kubvisa midziyo? Ndeupi musiyano uripo pakati pebvudzi laser kubviswa uye kusarudza bvudzi kubviswa? Ngatitarisei nezvekuti Laser Runako Muchina Mugadziri anoongorora sei kubviswa kwebvudzi uye kusarudza bvudzi! Pakusarudza chishandiso chekubvisa bvudzi, kana runako salon ...
Nei Uchisarudza Fibre Laser Bvudzi Kubvisa Mushini weBvudzi Kubvisa?
Semunhu anoda runako, chirongwa chekubvisa bvudzi chinowanzoiswa munzvimbo yekutanga, nekuti chete neganda rakatsetseka uye rinochinja sehwaro, chirongwa chekupedzisira chekuchengetedza uye chekuchengetedza chinogona kuitwa pasina basa rakawandisa risingabatsiri. Kutaura nezvenzira dzekubvisa bvudzi, hapana zviripo chete zvigadzirwa zvekubvisa bvudzi pamusika wekunaka, asi vese vane zvipingaidzo zvavo izvo zvisingakwanise kuve kusaziva ...
Kuchengetedza panguva yeLaser Runako
Nei vanhu vazhinji vakawana zvavakange vambofungidzira mushure mekuita mapurojekiti eraser? Chikamu chikuru cheichi chakakonzerwa nekushaikwa kwekutarisirwa kune pre- uye post-laser kurapwa. Tevere, iyo Laser Runako Muchina Mugadziri anotora wese munhu kuti aone zvaunofanirwa kuteerera! a. Bvunza mutengi usati waitwa oparesheni: kunyangwe iro ganda rakapfava, rinorwara, kunyangwe paine ...
Kubviswa kwebvudzi uchishandisa iyo 808nm Diode Laser Bvudzi Kubvisa Muchina kune zvakashata pamuviri here?
Saiye Laser Runako Muchina Mugadziri, ini ndoda kukuudza iwe kuti iko kushandiswa kwe laser runako michina haina kurwadziwa uye yakachengeteka. Laser runako inzira nyowani yerunako yakabuda mumakore apfuura. Kana ikakwenenzverwa neyakaenzana mwero we laser mwenje, ganda rinova rakapfava uye rakatsetseka. Zvakadai sekurapa acne, sputum nhema, zera mavara, kubvisa bvudzi, kubvisa kumeso kumeso ...
Ndedzipi nyaya dzinofanirwa kucherechedzwa mushure mekunge Laser Runako Muchina wabvisa acne?
Kuvapo kwemacne mamaki kunoitisa kumeso kutarisika, izvo zvinokanganisa zvakanyanya runako rwezviso zvedu. Acne mamaki ari nyore kukonzera kushomeka. Laser runako michina yekubvisa acne mamaki ndiyo yakanyanya kunaka uye iri nyore kurapwa kwedambudziko iri nenzira. Saka, ndeapi matambudziko iwe aunofanirwa kutarisisa mushure mekubvisa acne mamaki? Tevere, ngatiteerere kuunzwa kweLaser Runako Machi ...
Unoziva here sarudzo yeLaser Bvudzi Kubvisa chiridzwa?
Muzhizha rinopisa, vanhu vakapfeka hembe dzakanaka uye dzinotonhorera, asi kune vanhu vane bvudzi rakasimba remuviri, vari kunetsekana nekunyara kwekubvisa bvudzi remuviri. Kune nzira dzakawanda dzechinyakare dzekubvisa bvudzi, asi bvudzi rekubvisa harina kunaka uye pane kurwadziwa kwakasimba. Iyo 808 laser bvudzi rekubvisa chimbo inogona kuzadzikisa chando zvachose panzvimbo inotonhora, inova ...
Ndeipi nzira yakanakisa yekudzora uremu?
Nzira dzekudzikisa huremu dzinopfupikiswa sekurovedza muviri uremu, kudya uremu, kurasikirwa uremu hwezvinodhaka, uye kurasikirwa kwechidimbu. Ndehupi hunhu hweidzi nzira dzekudzikisa uremu? 1. Kuita maekisesaizi kuti uderedze huremu inzira ine hutano yekudzikisa huremu, asi zvinotora munhu ane chakati kuti chekutsungirira kuti awane mhedzisiro. Kurema kwekurasikirwa nemhedzisiro kunononoka uye ...
Chii chinonzi RF Runako Tekinoroji?
Sezvo Laser Runako Machine Fekitori, goverana newe. Nekukurumidza kuvandudzika kwetekinoroji yazvino yerunako, kune akawanda uye mazhinji matekinoroji ayo anogona kuve akachengeteka uye zvinobudirira kukurudzira kugadziridzwa kweganda. Nzira dzechinyakare dzekusavhiya ganda kumutsiridzwa dzinosanganisira kemikari exfoliation, ganda kubvarura, uye laser remodeling (exfoliation), iyo inogona kubvisa ganda pamusoro. Nekudaro, izvi zvinopinda ...
Ndeapi maFreckle Runako Midziyo?
Mavara haangodzikise kukosha kwechiso chete, asi zvakare anokanganisa mamiriro. Ndeipi nzira inofanira kushandiswa kubvisa zvachose mavara kana mavanga kumeso? Ndezvipi zviridzwa zvinogona kubvisa mabara? Ngatigoveranei naLaser Runako Machine Mugadziri. Chii chinonzi picosecond? Picosecond Laser Tattoo Removal Machine ndeye Q-yakachinjiswa mhando yeraser. Inonyanya kushandiswa pakurapa mamwe map ...
Sei Kubvisa maTattoos Zvakachengeteka?
Kugeza nyora kubvisa mifananidzo, zvinyorwa, uye mavara echiRungu ayo akange akanyorwa nyora pamuviri. Pamwe nekuda kwerudo, hupenyu, uye chinangwa chekuchinja chinzvimbo kana chimiro, huwandu hwevanhu vanogeza nyora huri kuwedzerawo. Muchokwadi, kubvisa matatto hakusi nyore sekufungidzira. Izvi zvinodaro nekuti panguva yekutema nyora, iyo pigment inoshandiswa inowanzo kuve mune dermi ...